Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xogta Aan Bixin Karin Xaqiiqooyinka LifeBogger
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Croatian Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius Football kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska; "Hen". Our Ivan Perisic Childhood Story Sheeko iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof walba waa ogyahay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah sida garabka ama weeraryahan kale. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mida tixgelinta Ivan Perisic ee Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Hore
Ivan Perisic wuxuu ku dhashay 2nd maalinta febraayo, 1989 hooyadiis, Tihana Perišić iyo aabaha Ante Perisic ee ku yaala Iskuday, Croatia.
Ivan Perisic wuxuu ka yimaadaa asal ka soo jeeda qoyskiisa. Isagoo kaashanaya waalidkiis, Ivan ayaa ku koray walaashiisa kaliya ee Anita Perisic. Dabadeed wakhtigiisii ​​carruurnimadiisa, saaxiibbadiis waxay u adeegsadeen inay isaga wacaan Koka taasoo macnaheedu yahay "si ay u" afkiisa hooyo. "Hen"Naaneeyska ayaa yimid sababtoo ah Ivan oo ahaa marwalba ayaa lagu arkay isaga oo caawinaya aabihiis si ay u beeraha digaaga oo ka baxsan meeshiisii ​​Omis ee xeebta Croatia.
Dalladaha digaaga ayaa ahaa ganacsi weyn Ante (Ivan aabaha) iyo qoyskiisa. In kastoo lagu magacaabo naaneyska "Hen", Ivan weligiis ma daryeeynin madaama uu ku faani jiray ganacsigii aabihiis.
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan - Jacaylka Caanaha & Qamiis
Aside ka caawinta waalidkiisa beeraha digaaga, Ivan Ivan ayaa horumariyay xirfad hor leh kubada cagta. Wuxuu isticmaalay waqtigiisii ​​firaaqada ahaa si uu u ciyaaro kubada cagta iyo xamaasadiisa ciyaarta ka dib wuxuu arkay isaga oo isqoriistay koox maxali ah, Hajduk Split isaga oo siiyay marxaladda si uu u muujiyo tayadiisa.
Ivan ayaa raadinaya inuu xirfaddiisa u qaato si aad u daran iyo heerka xigta wuxuu la yimid dhibaato dhaqaale ee qoyska Perisic. Waalidiintiisa ma awoodi kari waayeen kharashka akadeemiyada. Baahida loo qabo lacagaha ayaa la yimid allabaryo badan waayo, aabihiis oo runtii lahaa inuu iibiyo kaydka digaaga ee digaaga si uu u daryeelo dalabaadka xirfadiisa wiilkiisa.
Aabaha Ivan, Ante Perisic waa nin aaminsan in uu maalgashiyo wiilkiisa xitaa haddii ay macnaheedu tahay in ay ka baxaan hantida uu leeyahay. Ante ayaa iibiyey qalabkiisa digaaga isagoo doonaya inuu wiilkiisa u diro akadeemiyada kubada cagta ee ugu wanaagsan Croatia.
Isagoo dalbaday inuu qoyskiisa kor u qaado oo uu ordo, Ante waxay iibsatay qalabka beeraha ee deyn ahaan taas oo markii dambe lagu helay dhibaato (Faahfaahin hoos ku qoran ee xaqiiqda qoyska Ivan Perisic). Antie Perisic wuxuu u joogay wiilkiisa talaabo kasta oo jidka ah.
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan - Kacbada ugu dambeysa iyo kor u qaadida magaca
Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd ganacsiga digaaga qoyska oo dhigay koorsada mustaqbalka Ivan ee mustaqbalka. Ivan ayaa lix sano oo xariir ah ku qaatay Hajduk, isaga oo ciyaaraya kubadiisa iyo tagitaanka dugsiga. Inkastoo uu ku mashquulsan yahay iibsigii qalabka digaaga, Ivan aabihiis aragtidiisa ayaa go'aansaday inuu qaato amaah kale. Waqtigaan, deymaha amaahda waxaa loo isticmaali jiray in wiilkiisa u diro Faransiiska si uu u helo fursado waaweyn mustaqbalkiisa. Ilaa hadda, Ivan ayaa loogu yeeray maxkamadeynta Sochaux, oo ah koox Faransiis ah oo ay aasaaseen Jean-Pierre Peugeot, oo xubin muhiim ah ka leh qoyska Peugeot.
Wiil dhalinyaro ah, Ivan oo ah ujeedada ugu muhiimsan ee uu Faransiisku ku qaadanayo inuu fursad u helo mustaqbalkiisa wuxuu ahaa inuu sii joogo madaxbannaanida, isla markaana uu ku soo celiyo deymaha weyn ee aabihiis.
Shaki la'aan, waxyaabo badan oo ka mid ah lacagtan ayaa loo baddalay inuu u dhaqaaqo Sochaux. Tani waxay ku dhacday xilli 2006 / 2007. Nasiib wanaag isaga, Ivan ayaa jabiyay sida ugu dhaqsaha badan markii uu ciyaaray kulankiisii ​​ugu horeysay ee kooxda. Xagaaga, 2006, wargeysyada Faransiisku waxay bilaabeen qoraal ku saabsan a dhalinyarada curdunka ah hoos ku sawiran kuwaas oo jeclaan lahaa inay ku farxaan dadka.
Ivan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah u horseeday inuu u dhaqaaqo Belgium halkaasoo uu aaminsan yahay inuu sii wadi doono. Ivan ayaa amaah ugu soo ciyaaray Roeselare ka hor inta uusan u dhaqaaqin Club Brugge halkaas oo uu ugu dambeyntii magac u sameeyey. Iyadoo kooxda reer Belgian, Ivan uu noqday gooldhaliyaha ugu goolasha badan kooxda Belgian Pro League iyo xiddiga sannadka ee ugu fiican sannadka ee 2011.
Fannaankan wuxuu kasbaday inuu u guuro Borussia Dortmund halkaas oo uu ku guuleystay 2011-12 Bundesliga. Waqtigaan, isaga oo aan loo yaqaanno sida wiilal caajis ah, laakiin ciyaaryahan kubax leh oo daa'im ah garbaha iyo goolka hortiisa. Safarkiisa VfL Wolfsburg iyo Inter Milan ayaa soo raacay xiga iyo inta kale, sida ay sheegi lahaayeen, hadda waa taariikh.
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Xiriirka
Ciyaaryahan kasta oo guuleysta kubbada cagta Croatia, waxaa ku jira wag, jacayl iyo xaas. Ivan Perisic ayaa la kulmay gabadhiisa caruurnimada, Josipa ee dugsiga sare. Kadibna, labada jaceylku waxay ahaayeen kuwo isku wada mid ah oo wadaagay kursi isku mid ah fasalka.
Labaduba waxay bilaabeen xidhiidhkoodii asxaabtii ugu fiicneyd, kadibna ay wada shaqeeyaan. Ivan iyo Josipa ayaa guursaday 2012 xilligii uu joogay Borussia Dortmund. Waxay lammaane farxaan tan iyo markii ay isguursadaan.
Labada lamaane waxay leeyihiin gabadh la yiraah Manuela iyo wiil, Leonardo oo saddex sano jir ka weyn walaashiisa. Leonardo Perisic wuxuu ku dhashay Wolfsburg, waxaana la sheegay in uu xiriir adag la leeyahay aabihiis oo aaminsan in wiilkiisa uu maalin uun noqon lahaa ciyaaryahan kubad sameeya. Waqtigan, iyada oo aan jirin dhaqaale dhaqaale sida uu la kulmay qoyskiisa.
Ivan Perisic ayaa si buuxda u go'aamiyay qoyskiisa. Adigu ma jecla faafinta aad u badan, Ivan mar hore sawirkiisa ayuu la qaatay qoyskiisa hortiisa hortiisa ee hareeraha quruxda badan ee Lake Lugano ee Switzerland.
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xaqiiqooyinka Qoyska
Kaliya Ivan Perisic oo kubada cagta sameeyay ayaa faa'iido u leh qoyskiisa. Waxa uu daryeelay hooyadiis, walaashiisna wuxuu dejiyey deynta aabbihiis ee qalabka beeraha ee uu ku iibsaday deyn si uu u ilaaliyo qoyskiisa.
Sida ilaha la sheegay, qalabka beeraha Antie ayaa iibsaday amaahda laguma siinin waqtigii loogu talagalay taasina keentay dagaalo sharci ah oo dhab ahaantii heley qoyska Perisic. Baqdintoodu waxay ugu dambeyntii soo gebagebeeyeen sida Ivan uu bixiyay hal deyn oo keliya.
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xaqiiqda Xirfadaha
Ivan Perisic mar hore ayuu ku dhacay Jurgen Klopp Borussia Dortmund oo aan wakhti u ciyaarin. Klopp sawir hoos ku xusan wuxuu had iyo jeer ku hadli jiray turjumaadda Perisic iyo mar uu ku tilmaamay "caruureedDabeecaddiisa awgeed. Ivan Perisic ma jecla inuu ku fadhiisto kursiga keydka. Markii la wareystay arintaan, wuxuu yiri;…
"Marka aan fadhiyo kursiga keydka, waan dhimanayaa," Ma ciyaari doono ciyaar aan ku ciyaarayo sida ciqaab ii. Waa inaan bartaa sida loo noqdo xirfad ku saabsan habka adag. Waa inaan bartaa maskax ahaan "
Ivan Perisic maaha saaxiib aan ku iibsaday Juventus. Marka uu xanaaqo, wuxuu ka soo horjeedaa qofka ka soo horjeeda qoorta iyo daanka sida loo arko kiiska Juan Cuadrado iyo Alvaro Morata.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta Ivan Perisic Childhood Story plus iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!